Isifudumezi se-aquarium: yintoni, iimodeli, iintlobo kunye neempawu | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, I-Aquarium yetropiki
Enye yezinto ezingenakuphoswa kwi-aquarium yentlanzi yetropiki Isifudumezi se-aquarium. Ndiyabulela kule nto, ubushushu obuyimfuneko bunokufezekiswa apho intlanzi inokukhula kwimeko elungileyo. Iintlanzi zaseTropiki zifuna ubushushu obuphezulu kuneentlanzi ezivela kumanzi abandayo. Le yindlela esifeza ngayo ukuba banokuba nobushushu bomzimba wabo ngokwamanzi okusingqongileyo. Nangona kunjalo, kukho amawaka ezifudumezi ze-aquarium. Ke ngoko, siza kukunceda ukhethe ukuba yeyiphi eyona heater ye-aquarium ekufaneleyo kunye neemeko zakho.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba yeyiphi eyona heater ye-aquarium kwaye yeyiphi impawu ekufuneka ibenayo ukuze ibe nomgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
1 Esona shushu siShushu se-Aquarium
1.1 I-BPS (R) Isifudumezi esingena emanzini
1.2 Sera 8720 Ngokuqhelekileyo Isifudumezi esingu-100 W
1.3 Isifudumezi seHygger Aquarium
1.4 Ulawulo lweJBL Heater
1.5 Ithemitha yeHT ngokuzenzekelayo Isifudumezi seHT 50
2 Yintoni i-aquarium heater?
3 Iindidi zezifudumezi zamanzi
3.1 Isifudumezi sangaphakathi se-Aquarium
3.2 Izifudumezi zokubamba
3.3 Izifudumezi ezingaphantsi
3.4 Izifudumezi zangaphandle okanye zeefilitha
3.5 Ucingo lokufudumeza okanye isifudumezi esisezantsi
4 Uyikhetha njani i-heater ye-aquarium
5 Ungayibeka phi isifudumezi kwi-aquarium
6 Ngaba ungafaka isifudumezi emanzini akwariyam abandayo?
Esona shushu siShushu se-Aquarium
I-BPS Aquarium heater ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Isifudumezi seLISM® Bona amanqaku Jonga umnikelo
Iya kuba ngama-8720 Ngokwesiqhelo ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
UMarina 11230- Thermo ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	I-BPS Aquarium heater ...
Umgangatho wexabiso	Isifudumezi seLISM®
Oyintandokazi yethu	Iya kuba ngama-8720 Ngokwesiqhelo ...
UMarina 11230- Thermo ...
Siza kujonga phakathi kweyona modeli zibalaseleyo ngokunxulumene nomgangatho kunye nexabiso ukubona ukuba yeyiphi eyona modeli ilungele iimfuno zethu.
I-BPS (R) Isifudumezi esingena emanzini
Olu hlobo lwe-heater ye-aquarium inamandla e-150W. Inokuntywila ngokupheleleyo kwaye yenzelwe ii-aquariums ezinobungakanani obahlukeneyo. Kukhuselekile kakhulu kulawo manzi kunye netyuwa. Kuquka iikomityi ezimbini zokutsala ukuququzelela indibano. Isebenza kubushushu obuphakathi kwama-20 nama-34 degrees, ukulungelelanisa zonke iintlobo zentlanzi yetropiki. cofa Akukho mveliso ifunyenweyo ukuba ufuna ukuthenga le modeli.
Sera 8720 Ngokuqhelekileyo Isifudumezi esingu-100 W
Iya kuba ngama-8720 Ngokwesiqhelo ...
Le modeli yenziwe ngeglasi ye-quartz kwaye iyathengiswa. Inoyilo olufutshane ngokufanelekileyo, ke ayizukuthatha indawo kwi-aquarium. Unokhuseleko olukhuselekileyo kunye nokukhusela ubushushu. Inceda amanzi amatsha kunye nolwandle. cofa apha ukuthatha ithuba lesithembiso kwaye uyithenge ngexabiso elifanelekileyo.
Isifudumezi seHygger Aquarium
Le mveliso inentonga yokufudumeza enceda ukulawula ubushushu. Inesilawuli sokubonisa ubushushu esazi ixabiso ngalo lonke ixesha. Singabulawula ubushushu kwaye siliguqule ukusuka kwi-16 ukuya kuma-32 degrees, ke sinokugubungela iintlobo ezimbalwa zeentlanzi zetropiki. Isebenza zombini i-aquariums zamanzi amnandi kunye neetyuwa kwaye ixhasa umthamo we-115 ukuya kwi-450 yeelitha.
Umboniso apho ubushushu bunokufundwa yi-digital blue LED. Xa ubushushu bamanzi bufikelela kwixabiso lobushushu obumiselweyo, ukukhanya kujika kube luhlaza kwaye isifudumezi siyeke ukusebenza. Ukuba ubushushu buyehla kwakhona, isifudumezi siza kubuya silungelelanise. Kukhuselekile kuba inenkqubo yokhuseleko nenkumbulo yokucima umbane kunye nomsebenzi wokhuselo ngokuchasene nobushushu obungaphaya. Ukuba kukho ukusilela kombane kwaye iqondo lobushushu lifikelela kuma-36 degrees, umbane uzisika ngokuzenzekelayo kwaye uyeke ukufudumeza. Ungacofa Akukho mveliso ifunyenweyo ukuthenga le mveliso.
Ulawulo lweJBL Heater
I-JBL Protemp S 150 W 200 g
Sisifudumezi se-aquarium esinolawulo olufanelekileyo lobushushu kwabo iitanki zentlanzi ezinobungakanani obuphakathi kweelitha ezili-10 ukuya kwezingama-50. Njengoko inikezelwe kwiitanki ezincinci zentlanzi, kulula ukuyifaka. Unokukhetha iqondo lobushushu kwidayali kwaye uyifake ngokulula ngenxa yekomityi yekomityi yokutsala ngaphakathi kwe-aquarium. Uluhlu lobushushu olusebenza kulo luphakathi kwama-20 nama-34 degrees. Yenziwe ngeglasi ye-quartz enobugqwetha kunye nenkqubo yokuvala ngokuzenzekelayo. Ukuba ufuna ukuthenga le mveliso, cofa apha.
Ithemitha yeHT ngokuzenzekelayo Isifudumezi seHT 50
Le modeli ineqhosha elisetyenziselwa ukulawula ubushushu kunye nokukhetha kwangaphambili amanzi. Sebenza ngezithuba ezingama-19 ukuya kuma-31 degrees. Ithembeke kakhulu kwaye ikhuselekile kuba inetyhubhu yeglasi eshinyeneyo kwaye iyamelana neempembelelo. Inomqhubi wenqwelomoya osincedayo sibone ukuba isebenza kangakanani kwaye iyasika ukuba ubushushu bamanzi bufikelele kubushushu obucwangcisiweyo. Ungathenga le modeli ngokunqakraza Akukho mveliso ifunyenweyo.
Yintoni i-aquarium heater?
Isifudumezi se-aquarium yinto eluncedo lungelelanisa ubushushu kwimfuno yentlanzi yetropiki. Ezi ntlanzi zinegazi elibandayo kwaye zifuna ubushushu obuphezulu obuphezulu. Ke ngoko, kubalulekile ukuba nesifudumezi se-aquarium ukuze uhlengahlengise ubushushu obufunwa zezi ntlanzi. Ubushushu bamanzi kwi-aquarium bunokwahluka kwiimeko ezahlukeneyo. Ngezi heater ze-aquarium sinokucwangcisa ubushushu apho kufuneka kuhlala kuhlala amanzi. Siyabulela oku, asiyi kubangela nayiphi na imeko yoxinzelelo kwintlanzi ebangela uhlobo oluthile lwesifo esingafunekiyo.
Iindidi zezifudumezi zamanzi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zesifudumezi se-aquarium ngokuxhomekeke kwiimpawu ezithile.
Isifudumezi sangaphakathi se-Aquarium
Zezi zibekwe ngaphakathi kwi-aquarium kwaye zenziwe ngeglasi. Banokuxhathisa ngaphakathi kwaye yile nto ibangela ukuba ubushushu bamanzi bonyuke. Bane-thermostat yangaphakathi efakiweyo ukuqala okanye ukubamisa.
Zizo ezo zenziwe ngeglasi. Inqaku elikhethekileyo lelo umphezulu kufuneka ube ngaphezulu kwamanzi. Azinako ukuntywiliselwa ngokupheleleyo. Ukuthandwa kwayo kungenxa yexabiso layo eliphantsi.
Zizo ezo ezinokuntywiliselwa phantsi kwamanzi kwaye zezona zisetyenziswayo. Enkosi kwinto yokuba banokuntywiliselwa ngokupheleleyo, kusinceda ukuba sikhethe ngcono indawo esifuna ukuyibeka kuyo. Zikhuselekile kwaye aziguquki xa kufikwa ekusebenziseni.
Izifudumezi zangaphandle okanye zeefilitha
Zizinto ezibekwe ngaphandle kwe-aquarium kwisihluzo ngendlela encedisa kwinkqubo yokuhluza. Ke, amanzi afikelela kubushushu obufanelekileyo xa ephinda ahluzwa.
Ucingo lokufudumeza okanye isifudumezi esisezantsi
Zezo zisetyenziselwa ii-aquariums kunye kunokuba luncedo ngakumbi kwezo zinezityalo zokwenyani. Nangona benendibano enzima ngakumbi, akukho luhlobo lwesixhobo lubonakalayo. Oku kuya kunceda ubuhle beetanki. Kukho abo babajonga njengeyona ndlela ilungileyo, kodwa kufuneka ube namava kwi-aquariums.
Uyikhetha njani i-heater ye-aquarium
Kuba zininzi iimodeli zesifudumezi se-aquarium, kuya kufuneka ukhethe izinto ezithile ezibalulekileyo. Enye yezinto ezibalulekileyo bubungakanani be-aquarium yakho. Isifudumezi ngasinye senzelwe ukwandisa ubushushu benani elithile leelitha zamanzi. Kuya kufuneka ukhethe ubungakanani be-aquarium kakuhle ukuze ukwazi ukukhetha imodeli yesifudumezi. Uluvo kukuba ubushushu bamanzi bunyuke kancinci. Ukuba sikhetha imbawula enkulu kakhulu, iyakufudumeza amanzi ngokukhawuleza kwaye yenzakalise iintlanzi.
Icebo lokumisela eyona ifanelekileyo kukudibana 1 watt yamandla kwilitha nganye yevolumu yetanki.
Ungayibeka phi isifudumezi kwi-aquarium
Ezona ndawo zihlala zibekwa kuyo zezi zilandelayo:
Kufuphi nendawo yokungena kwesihluzi samanzi.
Inokubekwa ngokuthe tye kufutshane nendawo yokuphuma.
Kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-aerator phantsi kwesifudumezi samanzi. Oku kunceda ukutyhala amanzi abandayo kwi-aquarium ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Ngaba ungafaka isifudumezi emanzini akwariyam abandayo?
Ukuba ujongene neentlanzi zamanzi abandayo akukho sidingo sokulungela imbawula. Kufuneka ukhusele iintlanzi kwiqabaka, ngakumbi ukuba sinazo kumachibi angaphandle.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nesifudumezi se-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Isifudumezi se-Aquarium